आइपीएलः तीन–तीन पटकका विजेता चेन्नई र मुम्बई भिड्दै - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः तीन–तीन पटकका विजेता चेन्नई र मुम्बई भिड्दै
काठमाडौं, वैशाख १३ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) अन्तर्गत शुक्रबार चेन्नई सुपर किंग्स र मुम्बई इन्डियन्स भिड्दै छन् । यी दुई टिमबीचको भिडन्त चेन्नईमा नेपाली समयअनुसार राति ८ः१५ बजेदेखि शुरु हुँदैछ ।
तीन–तीन पटकका आइपीएल विजेता चेन्नई–मुम्बईको भिडन्त आज रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ । जारी आइपीएलमा चेन्नईले होम ग्राउन्डमा हार बेहोरेको छैन । जारी सिजनमा उसले चितम्बरम स्टेडियममा भएका पाँचै खेलमा जीत हात पारेको छ ।
याे पनि पढ्नुस दिल्ली र पञ्जाब भिड्दै, आज सन्दीप खेल्छन ?
महेन्द्रसिंह धोनी कप्तान रहेको चेन्नई ११ म्याच खेल्दा १६ अंककासाथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ । ११ खेलमा धोनीको टिमले ८ मा जीत हात पार्दा ३ खेलमा मात्र पराजयको स्वाद चाखेको छ । यता, रोहित शर्मा नेतृत्वको मुम्बई लिग तालिकामा १२ अंककासाथ तेस्रो स्थानमा छ । उसले १० खेल खेल्दा ६ मा जीत र ४ खेलमा हार बेहोरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस हैदरावादविरुद्ध सन्दीपलाई ठूलो मौका, तोड्न सक्लान् वार्नर–बेयरिस्टोको जोडी?
ट्याग्स: chennai vs mumbai, IPL